आज त पढ्छु अति नै भयो भनेर बिहानै उठ्ने साइत खोजेको नि आज १८ महिना बितिसकेछ । समय त चिप्लिदै जादो रहेछ । किताबका पाना नपल्टाएको पनि आज १८ महिना बितिसकेछ । कसो भोलि त पड्चु भनेर नभनेकोमा चाँही खुशी नै हुनुपर्ने अवस्था लाग्छ । नभए त भैरब अर्यालले भनेको जय भोलि पूर्ण सार्थक हुन्थ्यो होला । तर जय भोलि अहिले जय आज भएको अनुभब हुन थालेको छ । भोलि त आउदैन भन्ने थाहा थियो । अब त आज पनि नआउने र छेपाराको शास्त्र जस्तो भएकोमा आँफै लाई अचम्म लागेको छ । जीवनमा जस्तै पढाइ मा पनि उतारचडाब हुनु स्वाभाबिक रहेछ । पढ्नु पनि बानी रहेछ । बानी बिग्रिएपछी सुध्रिन गार्हो ।
म त पढ्ने मान्छे पो हो भन्ने कुरामा घमन्ड पनि उम्रिएको थियो कुनै बेला । त्यो स्वाभाबिक पनि थियो किनकी म कुनै खेल खेल्ने गहिरो अभिरुची पनि थिएन । म टाइम पास पनि किताबका पानामा गर्न सक्ने सामर्थ्य राक्थे । तर त्यो सेखी आज सप बिलिन भैसक्यो ।
समय पाए भने त अबस्य पढ्छु भनेर गुल्मी जिल्ला अस्पतालमा भएको पोस्टिंग बाट रिडी सरुवा गर्न नि एक वर्षा लग्यो । तर रिडी सरुआ गर्ने बेलामा लोकसेवाको नतीजा प्रकाशन भयो र नाम पनि निस्कियो. । .जुन कुरो मलाई विश्वास नै थिएन । किनभने मैले राम्रोसंग पढ्न पाएको थिएन । सप दोष जति कामको व्यस्तता र समय अभाबमा थोपेरर आत्मसन्तुस्टी लिएको थिए । हुनपनि गुल्मी मा काम चाहि बढी नै हुन्थ्यो । पढ्नलाई बुक बाट गार्हो भयो र अब चाँही टेबलत किनेर तेस्मै पद्नुपर्यो भनेर ipad पनि किनियो । तर तेस्को काम पनि किताबका इलेक्त्रोनिक भर्सन राख्ने मात्र भएको छ । अहिले मलाई समय निकाल्न समस्या छैन तर पनि समय निकालेर पढ्ने काम भने गर्न सकिएको छैन ।
पढाई प्राथमिकता हो भन्ने कुरामा दुबिधा छैन र हुनु हुदैन । डक्टर दुर्गाम्मा जान मन लगेर त खोज्दै खोज्दैनन् । त्यसैले त्यसको मुल्य अलि दुर्गमको अंकmaa बढी गरिएको होला । तर ब्यभारिक्तामा दुर्गमको phc रोजाइमा पर्नु नि स्वाभाविक नै हो किनभने जिल्ला अस्पातलमा नाइट ड्युटी गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । जसले गर्दा पढाईको लागि समय भने मुस्किल हुन सक्छ । त्यसमाथि जिल्लाको भन्दा phc मा अंक पनि बादी पाइने र पढ्न नि सजिलो हुने भएको हुँदा सबै डाक्टरहरु त्यतै हुल्लिन खोज्नु स्वाभाविक नहोला त । अब अहिलेको परिस्थिती कस्तो छ भने जिल्लामा डक्टरले नाइट ड्युटी लगायतका बिभिन्न काम गरेर सेवा पुर्याएको हुन्छ । तर तेही जिल्लामा मरिमरि काम गर्नेको बढुवा पनि अंक कम हुने र पढ्नका लागि पनि अंक कम हुने । यो चै कसरि न्यायपूर्ण हुन सक्छ र ? अनि अलिकत टाठा बाठाहरुले चाँही सरुवा गरेर phc मा गएर जिल्लाको तनाब बाट मुक्त हुन्छन र अंक पनि बढी प्राप्त गर्छन । काम गर्न गाह्रो भन्दा पनि एक जना चाँही मरी मरी काम गर्दा अर्को तिर आबस्यक्ता भन्दा बढी सन्ख्यामा डाक्टरहरु भएर १० देखि २ को काम मा पनि आलोपालो गरेर हप्तामा केहि दिन मात्र गएर अरु दिन चाँही कागज्मा हाजिर र वास्तवमा छुट्टीमा बसेको देख्दा कसलाई पेलिएर काम गर्न मन लाग्छ र । अबस्यक्ताका आधारमा भन्दा पनि हचुवा तालमा नियुक्ति गरिनुले असमान कामको बोझ परेको यथार्थ देख्ने जिम्मेवार व्यक्ति को हो त ? जनसक्तिको सहि उपयोग नहुँदा एकातिर मोज गर्ने र अर्को तिर पेलिने अवस्था भैराखेको छ ।
पढ्नका लागि पनि भित्रै देखि उर्जा चाहिने रहेछ । त्यो उर्जाको खोजीमा आज धेरै दिन बितिसकेछ । समय बित्दै गएपछि जब परिक्षा नजिक आउछ तब भय सिर्जना हुन्छा र बल्ल उर्जा आउने हो कि भन्ने लाग्छ । समयसंगै दिमागका कोशीका पनि बुढा हुँदै जान्छन र टेर्न छोड्छन कि भन्ने भय भने सधै भैरहंछ । म त प्रेरणाको प्रतिक्छ्यमा छु । तर त्यो प्रेरणा कता हो कता हराएजस्तो पो लाग्छ ।